Yintoni i-LEGO Boost: Isikhokelo sokuyazi kubunzulu-Ikkaro
yokuqalisa >> Amathoyizi >> Ukunyusa iLego >> Yintoni i-LEGO Boost
Isekwe kwizitena eziphambili ezintathu okanye iziqwenga:
I-Hub equlathe iBluetooth kunye nehabhu eneemoto ezimbini.
Imoto yesibini yangaphandle
kwaye ke umbala kunye nomgama woluvo.
Iindibano eziza ngemiyalelo zenziwe zajikeleza ezi ziqwenga zithathu. Kodwa ezi zezona ziphambili kuba zingamandla okuqhuba. Nayiphi na enye ye-ace inokutshintshwa, kodwa la malungu asebenzayo ayimfuneko.
Ukuba uyayithenga, fumanisa yonke into ekufuneka uyazi ngaye Hambisa ihabhu
Iindibano ezi-5 ezichaziweyo zezi zilandelayo. Ngamnye uza nezikrini ezahlukeneyo, apho ubeka khona izinto ezintsha kunye nokuvula iibhloko zenkqubo entsha. Kude kube unyuka kwaye uqinisekise ukuba isiseko siyasebenza, abayi kukuvumela ukuba uqhubeke uye phambili.
Ngumfanekiso ngokugqwesa, oza engqondweni xa wonke umntu ecinga nge-LEGO® Boost, kuba kunjalo irobhothi emile okwe "humanoid". Yeyona montage eyona isikhumbuza ngombono wokuba sonke sinengqondo yeerobhothi.
Kumnandi kakhulu. NgoVernie sinokuyilawula intshukumo yayo, ihambela phambili nasemva kwaye ijike ngokwayo, kwi-axis yayo emileyo. Ngale ndlela siyenza ijikeleze.
Akashukumisi iingalo zakhe. Singamenza ukuba athathe izinto ngesandla. Kwaye into epholileyo yenye yezixhobo kukuba isivumela ukuba sidubule ithokheni yeLEGO, njengeprojektha.
Ikhithi iza nePlaymat, imephu elinganisiweyo ukuze sikwazi ukuhambisa irobhothi ngaphezulu.
Imontage ehlekisayo kakhulu eyayithandwa ngamantombazana. Ayishukumi, ihambisa intloko kunye nomsila kwaye inxibelelana neentshukumo ezithile, imibala, izandi, njl.
Okwangoku, kusele iindibano ezi-2, yeyona indichaphazeleyo. Ndaphoxeka kwaye ndicinga ukuba eyona ngxaki iphambili kukuba akukho lwazi malunga neebhloko kwaye kuba ungazi ukuba yeyantoni na, awuyazi ukuba uyisebenzisa njani xa sele idityanisiwe kunye nendlela yokunxibelelana.
Ukubonakala kupholile kwaye kukhupha izinto ezenziwa ziifrts ngeekhowudi zombala ngomgama kunye nenzwa yemibala kunye nokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuxhathisa ukwenza ukusebenza kweemoto zehabhu kunye nemoto yangaphandle.
Yintoni isifinyezo se Rover ezininzi, Into efana neRover (isithuthi) izixhobo ezininzi.
Ayikayinyusi okwangoku, kodwa kwinto endiyibonileyo ndiya kuyithanda, iyahamba kwaye iyadubula. Ngale nto sele ephumelele amanqaku amaninzi.
Lo ngumgca wemveliso encinci yokwakha iimodeli ezincinci ze LEGO®
Nje ukuba bayidibanise, ndiza kushiya ukubonakala kwam apha.
I-LEGO Yongeza ngokugqibeleleyo
Ukuba ufuna ukubona izimvo ezingakumbi kunye nemithombo yenkuthazo xa sele ukhathele iindibano ezisisiseko zekiti, tyelela Izimvo iposti, esihlala sihlaziya ukongeza iindibano ezintsha, kunye nokudityaniswa okutsha kunye ne-Hardware eninzi
Izinto eziluncedo nezingalunganga. Eyona ilungileyo kwaye imbi kakhulu
Njengazo zonke iimveliso, inezinto ezintle nezingalunganga. Ndiyincoma. Inyani yile yokuba iintombi zethu ziyayithanda kwaye ndiyayithanda nam kwaye ngaphandle kweengxaki ezimbalwa kunye nento endiza kuphawula ngayo, imnandi kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Into endiyithandayo encinci malunga ne-LEGO Boost
Ukuba iibhloko azinazo izithethi kunye nezandi ezizidlalayo kunye noko zikurekhodayo kwithebhulethi okanye usetyenziso lweselfowuni. Kuphulukana nobabalo oluninzi xa, emva kokuthetha ngendibano oyenzileyo, ithebhulethi oyiphetheyo yenziwe.
Ukuhambelana kwesixhobo. Ukuthenga ikhithi yeerobhothi kunye nokufumanisa ukuba ithebhulethi yakho ayihambelani yenye yezona zikhalazo ndizibonileyo kwi-Intanethi. Khange ndibenangxaki, nangona ubumbano ngeBluetooth lundinika iingxaki kwithebhulethi yeHuawei kwaye kufuneka siyinyanzele njengoko bendichazile esi sifundo.
Ixabiso. Ewe lixabiso eliphezulu, liyinyani, endicinga ukuba kufanelekile, kodwa kufuneka uqiniseke ukuba abantwana bakho bayayithanda.
Amaxwebhu. Ngaphandle kwamathandabuzo awona mava mabi ukuza kuthi ga ngoku. Nangona isicelo sikukhokela kuyo yonke into ekufuneka uyenzile, akukho ndawo apho bachaza khona ukuba yeyiphi na ibhloko yenkqubo nganye kwaye ukuba awuyisebenzisanga okanye ukuba omnye umntu ngaphandle kwalowo uyihlanganisileyo uyayithatha, awazi ukuba wenzeni ngeebhloko ezininzi.
Ndicinga ukuba umba wamaxwebhu yinto ekufuneka beyijongile bayisombulule kwi-LEGO.
Into endiyithandayo kukuba ivumela abantwana ukuba baqhubele phambili kwaye bafunde ngokuzimeleyo kwaye bayakuthanda oku kakhulu.
Ukongeza, iziphumo ezonelisayo zifunyanwa ngokukhawuleza. Ngale nto singabatyhafisi
Njengoko kuyi-LEGO, singenza naluphi na uguquko esinokucinga ngalo ngeziqwenga. Kwaye singasebenzisa iibhloko ezintathu ezizodwa ezinee-legos esinazo ekhaya kuyo nayiphi na enye indibano. Baza kwenza izitena zethu zisebenzisane.
Iyahambelana ne-LEGO Classic kunye neTecnich
1 Liquka ntoni?
2 5 ukunyuka
2.1 Irobhothi uVernie
2.2 UFrankie ikati
2.5 Umakhi wemoto
3 I-LEGO Yongeza ngokugqibeleleyo
4 Izinto eziluncedo nezingalunganga. Eyona ilungileyo kwaye imbi kakhulu
4.1 Into endiyithandayo encinci malunga ne-LEGO Boost
4.2 Into endiyithandayo